Fiaraha-miasa amin’ny MEDD: hahazo tany mirefy 5 ha isaky ny faritra ny Tily - ewa.mg
Fiaraha-miasa amin’ny MEDD: hahazo tany mirefy 5 ha isaky ny faritra ny Tily
News - Fiaraha-miasa amin’ny MEDD: hahazo tany mirefy 5 ha isaky ny faritra ny Tily
fitsinjovana ny hoavy. Miroso hatrany ny
ezaka ataon ny Minisiteran ny Tontolo iainana sy ny fandrosoana
lovainjafy (MEDD) amin ny Fanatanterahana ny Velirano faha 10 n ny
filohan ny Repoblika hanaovana an’i Madagasikara rakotr’ala, sy ny
fiarovana ny tontolo
Hisitraka tany 5 ha isaky ny
faritra avy amin’ny MEDD ny Tily. Natao hanatanterahana tetikasa
famokarana zana-kazo sy fambolen-kazo maodely ary hampiharana ny
fanabeazana ara-tontolo iainana izany. Notanterahina ny faran’ny
herinandro teo teny Antsahamarofoza ny fanaovan-tsonia ny
fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’izy ireo. Haharitra 10 taona ny
fanentanana sy ny fanabeazana
Miompana amin’ny fanentanana sy ny
fanabezana ny fiarahamonina rahateo ny andraikitry ny Tily ary
tafiditra ao anatin’izany koa ny fiarovana ny tontolo iainana.
“Hiara-kiasa amin’ny minisitera izahay amin’ny fambolen-kazo.
Hampanao fiofanana ireo tompon’andraikitra rehetra. Manao ny
fanentanana avy eo sy mijery ifotony ny tanana na toerana ahafahana
manatanteraka ny fiaraha-miasa”, hoy ny eo anivon’ny Tily.
fikambanana, ny sehatra tsy miankina…
Hisahana ny fanofanana teknika
momba ny fambolen-kazo kosa ny MEDD. “Tohin’ny fiaraha-miasa
efa niarahana amin’ny sehatry tsy miankina, ny diosezy eo anivon’ny
fiangonana katolika sy ny fikambanana izao. Misehatra amin’izany
koa ny Tily. Ao anatin’ny fanabeazana manomboka hatramin’ny ankizy
sy rehefa tanora izy ireo…”, hoy ny minisitra Vahiniala
Baomiavotse. Tetikasa fambolen-kazo maodely iarahan’ny rehetra
misitraka izao hatao izao. Tanjon’ny Tily ny hiasa ho an’ny
tanindrazana sy ny namana.
L’article Fiaraha-miasa amin’ny MEDD: hahazo tany mirefy 5 ha isaky ny faritra ny Tily a été récupéré chez Newsmada.
Firehetana tetsy Ambodivona :: Lehilahy lehibe kilan’ny afo tao an-trano
Nitrangana hain-trano goavana teny Ambodivona, omaly tamin’ny 6 ora sy sasany maraina. Tafavoaka ny trano nirehitra ireo mponina tao, ankoatra ny lehilahy lehibe iray, dimy amby valopolo taona. Ny vatana mangatsiakany efa kilan’ny afo sisa no natolotra ny fianakaviana. Trano lehibe roa no niharam-boina niaraka tamin’ny tranohazo iray. Nahazo ny efitrano fianarana an’ny sekoly iray ihany koa ny afo. Niainga tao amin’ny trano gasy misy rihana iray no niantombohan’ ny afo noho ny antony tsy fantatra mazava. May ihany koa ny trano hazo teo afovoany sy ny trano lehibe iray manana rihana roa. “Mbola teo am-pandriana izahay no naheno zavatra nipoapoaka mafy, izay noheverina ho vorona tao ambony tafo. Ny vadiko no nahita ny afo efa niredareda. Tsy naharay na inona na inona izahay rehetra fa nivoaka ny trano haingana avokoa”, hoy ny fitantaran’ireo niharam-boina. Hatairana teny an-tokotany Nony efa teo an-tokotany ny olona rehetra avy tao antrano no velona nifampanontany momba ny zokiolona iray. Tsy nisy azo natao intsony ny fiverenana tany an-trano ho famonjena an’io lehilahy lehibe io. Kamiao lehibe efatra feno rano no nampiasain’ny sampana mpamonjy voina tamin’ny famonoana ny afo teny antoerana. Samy tonga teny ny mpamonjy voina avy eny Andravoahangy sy ny teny Tsaralalàna. “Dimy minitra, taorian’ny antso, no nahatongavanay. Nifehy ny fiitaran’ny afo no natao voalohany. Teo no nahafantarana fa misy olona taraiky tao. Tsy avotra intsony izy sady efa nirehitra hatramin’ny gorodona nisy azy. Tsy voakitiky ny afo ny rihana voalohany sy ny tany ambany rihana tamin’ireo trano nisy rihana roa”, araka ny fanazavan’ny mpamonjy voina teny an-toerana. Tamin’ny sivy ora maraina tany ho any vao maty tanteraka ny afo. Teo ihany koa no nahitana ny razana. Nohamafisin’ny avy amin’ny sampana mpamonjy voina fa ny fitandremana ihany no fisorohana voalohany amin’ny hain-trano tahaka izao. L’article Firehetana tetsy Ambodivona :: Lehilahy lehibe kilan’ny afo tao an-trano est apparu en premier sur AoRaha.
Fifandraisan-davitra: 45,63 % ny fampiasana finday, taona 2019
Azo lazaina fa tsy tratra aoriana i Madagasikara amin’ny fampiasana teknolojian’ny fifandraisan-davitra, araka ny tarehimarika nomen’ny Artec*. Hita fa mivoatra haingana raha raisina, ohatra, ny fisian’ny tambajotra ahazoana mampiasa finday. Mpifaninana goavana amin’izany tambajotra izany ny Telma, ny Orange, sy ny Airtel. Samy ahitana carte Sim izay mitombo hatrany ny isan’ny mponina mampiasa ireo tambajotra telo ireo amin’ny faritra rehetra manerana ny Nosy. Ny taona 2006, mbola 5,79 % ny fampiasana finday, 13 taona aty aoriana, tafakatra 45,63 % izany ny taona 2019.Tafiditra amin’ity fampiasana finday ity koa ny fikirakirana ny vola, hita amin’ny MVola, ny Orange money, ny Airtel money, ary ny ataon’ny Paositra malagasy amin’ny alalan’ny Paositra money. Haingana ny fahitana izany manerana ny Nosy, fanoitra lehibe ho an’ny fampandrosoana. Ahazoana mifampiraharaha amin’ny fividianan-javatra sy ny fifanakalozana samihafa. Toy ny amin’ireo mpampiasa finday sy banky, tsotra sy azo antoka, manampy ny any ambanivohitrany Paositra money. R.MathieuArtec* : Autorité de régulation des technologies de communicationL’article Fifandraisan-davitra: 45,63 % ny fampiasana finday, taona 2019 a été récupéré chez Newsmada.
Saika hody any Antalaha…: tovolahy iray maty tampoka tao anaty sambo
Tovolahy iray antsoina hoe Havotriniaina Herinjaka, 23 taona avy any Andranomanelatra Antsirabe, mpiasana orinasa mpanao trano avy aty Antananarivo nanatanteraka asa fanaovana fotodrafitrasa manara-penitra tany Antalaha no namoy ny ainy tampoka. Voalaza fa nentin-katezerana noho ny olana teo amin’ny karama ka nanapa-kevitra ny handray sambo ary hiverina aty an-drenivohitra. Ny 17 marsa teo no nitranga ny loza, roa lahy izy ireo no niara-dia. Raha ny angom-baovao voaray, nitaraina ho naharary vavony tao anaty sambo ity tovolahy ity sady nikohaka ka tsy nazoto nisakafo. Tsy naharitra ela anefa izany soritr’aretina izany satria tsy nisy fizaham-pahasalamana rahateo ny fialana tao Antalaha ka nitambotsotra tampoka tao anaty sambo. Ny asabotsy alina teo no tonga tao Toamasina ny sambo nitondra azy. Tsy nisy ny fizahana sy ny fitiliana satria efa hiakatra aty an-drenivohitra ny razana. Nihorohoro noho izany ireo tantsambo rehetra tao amin’ny seranan-tsambo niaingany sy ireo niray sambo taminy.Sajo/J.C L’article Saika hody any Antalaha…: tovolahy iray maty tampoka tao anaty sambo a été récupéré chez Newsmada.
Miaramila nitifitra olona: manamboninahitra telo atao fanadihadiana eny amin’ny zandary
Anaovana fanadihadiana manokana eny anivon’ny zandarimariam-pirenena ireo manamboninahitra telo lahy voarohirohy tamin’ilay raharaha nahafatesana mpianaka tao Tsiroanomandidy, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika Malagasy, ny Jly Rabenaivoarivelo Jean Claude…Nambaran’ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika Malagasy fa ny kaomandin’ny BIA Tsiroanomandidy sy ny lefiny ary ny lehibe nitarika ny “opération” tao atsinanan’Ampamoriana, fokontany Bemangoraka, kaominina ambanivohitr’i Fihaonana, distrikan’i Tsiroanomandidy ireto nakarina aty an-drenivohitra ireto ary nentina nanaovana fanadihadiana eny amin’ny zandary mpanao famotorana ireto. Voalazan’ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika hatrany, araka ny fanazavan’ireto manamboninahitra voarohirohy ireto, fa tena dahalo tokoa ireto mpianaka voatifitra ireto, saingy ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny zandary no manamafy sy/na hahafantarana ny marina rehetra momba ity raharaha nahavoarohirohy ireto manamboninahitra ireto. Tsiahivina fa tonga tao amin’ity tanàna ireo miaramila notarihin’ny lehibe nitarika ny hetsika nataon’izy ireo, ny zoma lasa teo ka niteraka horohoro tamin’ireo mponina tao an-tanàna. Nasain’ireo miaramila nivoaka ny raim-pianakaviana iray, voalaza fa dahalo ka voatifitra avy hatrany. Nivoaka hiaro ity rainy ny zanany lahy ka notifirin’ny miaramila ihany koa. Nohamafisin’ny lehiben’izy ireo, nanao ity opération ity, anefa fa hoe tena dahalo ireto voatifitra ireto satria nahitana fitaovam-piadiana sy odigasy marobe ary nisy fifampitifirana teo amin’izy ireo sy ny miaramila tonga tao an-tanàna. Andrasana, araka izany, ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny zandary momba ireto manamboninahitra telo lahy ireto.J.CL’article Miaramila nitifitra olona: manamboninahitra telo atao fanadihadiana eny amin’ny zandary a été récupéré chez Newsmada.
Dès son intronisation, Ranavalona III déménage, comme le veut la tradition, dans une maison en bois près du palais royal, le Rova. Lors de son couronnement, le nom complet qui lui est donné est le suivant : « Sa majesté Ranavalona III par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, reine de Madagascar et protectrice des lois de la Nation ». La tradition malgache veut que lors des couronnements, des militaires soient présents. Ranavalona III a modernisé cette tradition en ajoutant à ces militaires 500 garçons et 400 filles issus des meilleures écoles de la Capitale. Ces élèves ont pu, en compagnie des militaires, accomplir la cérémonie traditionnelle de couronnement de la reine. Le rôle de la jeune reine était en grande partie cérémoniel, car presque toutes les décisions politiques importantes continuaient d’être prises par son époux et le Premier ministre, Rainilaiarivony, beaucoup plus âgé et plus expérimenté. Ranavalona était fréquemment appelée à prononcer des discours officiels au nom de Rainilaiarivony et à faire des apparitions pour inaugurer de nouveaux bâtiments publics, comme un hôpital à Soavinandriana et une école pour filles à Ambodin’Andohalo. Tout au long de son règne, la tante de Ranavalona, Ramisindrazana, qui avait renoncé au trône en faveur de sa nièce, a agi comme conseillère et a exercé une influence considérable à la cour. Recueillis par Iss Heridiny L’article Sillon du passé : 30 juillet 1883 : Ranavalona III monte sur le trône est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Sillon du passé : 30 juillet 1883 : Ranavalona III monte sur le trône a été récupéré chez Midi Madagasikara.